Ucwangciso lwezezimali -Benzi bezigidi
Sinikezela ngezixazululo ezenziwe ngokwezifiso kunye neengcebiso kuMntu ngamnye / iiNtsapho / amashishini amancinci ..
Inkqubo yabatyali mali
Ukufudukela kwelinye ilizwe yinto yethu ephambili. Oku kuthetha ukuba abathengi bethu basebenza nabanolwazi olunolwazi oluninzi. Inyathelo ngeNyathelo Indlela isoloko ilandelwa.
Uluhlu oluVulekileyo kunye nenkonzo enziweyo. Ukuthenga okanye ukuthengisa okanye ukuqeshisa ngeflethi / indlu / iofisi / ivenkile / ishishini / umhlaba wezolimo / ihotele / ihostele.
Ukusekwa kweNkampani, iOfisi eyiVenkile, iiAkhawunti zokuThengiswa ngaphandle, uphawu lokubhalisa uphawu, isisombululo esenziwe ngokweHR sonke kwindawo enye.
Ukuxhasa ngemali isixhobo sakho kukuvumela ukuba ugcine imali yakho kwezinye iimfuno zeshishini. Sebenzisa inethiwekhi yethu eyomeleleyo kunye namava.
Konke kwenziwa kube lula: IiAkhawunti eziMele ukuFunyanwa ngeMali, ukuFumaneka kweZakhiwo eziFumanekayo, ukuXhaswa ngoRhwebo ngeNkxaso-mali.
Ukuvulwa kweakhawunti yeBhanki yenziwe lula naphi na eMhlabeni. Inkampani yethu ichasene nokuThengiswa kweMali, ukuThengisa iziyobisi kunye nokuThengiswa kwabantu, ngenxa yoko, asibaxhasi abaxhasi.
Inkxaso-mali kunye nokuCwangciswa kobuGcisa
Ixabiso elongeziweyo leenkonzo, likuvumela ukuba ugxile kubuchule bakho obuphambili. Ilungile kumashishini amatsha nemibutho eqala kwimimandla emitsha.
Intlawulo kunye neephakheji zabasebenzi
Nditsho nabona gqirha banamava kwaye banamava abafumanisa, ukubhatalwa kunokuba yintloko. Yintsimi ekhethekileyo, ke vumela iingcali ziyisingathe.
Sinceda amashishini ekusebenziseni izinto ezingafunekiyo ukuze axhamle kwaye ajike wonke ishishini.
Uqingqo-maxabiso kwishishini lelona candelo libalulekileyo lokucwangciswa kwezemali, irhafu, ingxelo, ukudityaniswa kunye nokufunyanwa, njl.
Iingcebiso kunye nokuThobela
Ukushukuma kwimida kuyanda kubaluleke kakhulu ekusebenzeni kweshishini kwihlabathi liphela. Iingcali zethu zenza kube lula kubathengi bethu.
Inkonzo enye yemicimbi yonke yezomthetho, NGELizwe. Sineendawo ekubanjiswana ngazo ngamaxabiso ngamagqwetha ekuxoxwa nawo kunye namaGqwetha, iziQinisekiso zoMthetho kunye neMibutho.
Amathuba oShishino lweHlabathi